Hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 1987, ny YUFA Group dia nanangana tobim-pamokarana lehibe manana velarana 193.000 metatra toradroa miaraka amin'ny vokatra isan-taona hatramin'ny 25.000 taonina. Mifikitra amin'ny fanahin'ny faharanitan-tsaina mihoatra ny 30 taona, manolo-tena amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra avo lenta alumina andian-tsarimihetsika izahay. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny corundum fotsy mifangaro, ny spinel aluminium-magnesium, ny corundum matevina, ny corundum vita amin'ny kristaly tokana, ary ny α-alumina vita amin'ny kalisa.
Amin'ny alàlan'ny fantsom-barotra an-tserasera sy an-tserasera, ny vokatra YUFA Group dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 40 ao anatin'izany i Etazonia, Alemana, Korea Atsimo, Japan, Turkey, Pakistan, ary India sns.
30+ taona niainana
Ireo manam-pahaizana momba ny alumina manodidina anao, antoka ara-kalitao, izay hamaha ny olan'ny abrasives, fitaovana mateza ary lafiny hafa amin'ny lafiny matihanina ho anao.
Output lehibe, vokatra azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny famokarana 250.000 taonina isan-taona.
SERVICE FANJAKANA MAHAY
8 andiany, mihoatra ny 300 vokatra, manohana customization ny isan-karazany sy ny modely mifanaraka amin'ny ilainao.
Ekipan'ny R&D PROFESSIONAL
Ivon-toerana R&D 5, fifandraisana misy fiaraha-miasa amin'ireo vondrona fikarohana siantifika, toy ny Shanghai Institute of Ceramics, Akademia Shinoa momba ny siansa, sns. Ny fanavaozana sy ny kalitao no tanjontsika tsy tapaka.
17 lafaoro fanaraha-maso nomerika feno mandeha ho azy, lafaoro rotary 2, lafaoro tionelina 1 ary kilasy fanosehana 1, tilikambo fanamafisana 2, 2 desulfurization ary fitaovana enti-mitroka.
100% taham-pivoarana famokarana, tahan'ny fandalovana 100%. Fehezo tsara ny kalitao avy amin'ny akora hatramin'ny vokatra vita. Tsy hiantohana ny kalitao ihany fa hiantohana ihany koa ny fitoniana kalitao.
Ny vondrona YUFA dia feno fankasitrahana ireo mpanjifa vaovao sy taloha noho ny fahatongavan'izy ireo tao amin'ny orinasa hiresaka sy hianatra. Fantatry ny mpanjifa ny vokatra avy amin'ny YUFA ary mahatsapa ny fomba sy ny fanahin'ny YUFA. YUFA dia mamokatra vokatra avo lenta sy serivisy avo lenta hamerenana ny fanohanan'ny mpanjifa. Ary ny YUFA dia ho lasa mpiara-miasa azo antoka amin'ny mpanjifa.
Isan-taona dia handray anjara amin'ny fampiratiana isan-karazany mifandraika amin'ny indostria avy any ivelany sy any ivelany ny YUFA, mianatra mavitrika sy mifanakalo vaovao isan-karazany momba ny vokatra, manatsara ny kalitao sy ny haitao amin'ny vokatray, ary manantena ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa maro eran'izao tontolo izao, ary manantena hanomezana vokatra tsara sy serivisy tsara ho an'ny mpanjifa.